भाइरल चियावाली सृष्टिको पहिलो गीत यस्तो, कल्पना दाहालसंग गरिन रमाइलो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
भाइरल चियावाली सृष्टिको पहिलो गीत यस्तो, कल्पना दाहालसंग गरिन रमाइलो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
भिडियो मनोरञ्जन रोचक
March 30, 2021 March 30, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल चियावाली सृष्टिको पहिलो गीत यस्तो, कल्पना दाहालसंग गरिन रमाइलो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी एक सं’घर्षशिल महिला अब म्युजिक भिडियोमा पनि देखिने भएकी छन् । सानो सन्तानलाई पिठ्युमा बोकेर विहानै ३ वजे देखि काममा खटिएकी महिलाका बारेमा युट्युवमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी भाइरल भएकी थिइन् ।
पाँच महिनाको प्रेम पछि उनले विवाह गरेकी थिइन् । तर जिवन उनले सोचे जस्तो भएन । श्रीमानले छोडेर गएपछि उनको जिवन निकै कठिन भयो । प्रेम गरेर विवाह गरेका श्रीमानले अ’प्ठेरोमा पारेर गए । तर सन्तानलाई त हुर्काउनै पर्यो, आफ्नो पेट पनि पाल्न पर्यो । श्रीमान सुन्धारामा बस्ने गरेको र ठेक्काको काम गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
कहिले काँही फोन त गर्थे तर कहिल्यै माया देखाएनन् । हेर्नुहोस चियावालिको पहिलो गीतः
टिकटकमा चर्चित रहेकी निता सुनारको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ! हे’र्नुहोस् (भि’डियो सहित)